Toloram-potsiny : Kamo mandalina kolontsaina ny tanora | NewsMada
Toloram-potsiny : Kamo mandalina kolontsaina ny tanora
Efa saika manenika an’i Madagasikara mihitsy io aretin-dratsy mahazo ny tanora io ! Tsy avy hampiasa saina, hikaroka sy handalina fa ny hamantam-bonona ao anaty «internet» no maha maika. Io “internet” io no zary seha-pikarohana goavana ho an’ny tanora, ankehitriny. Izay voalaza ao, toa raisina ho marina avokoa. Marina ao anatin’ny saina fa mety tsy ho marina atrehi-maso anefa. Anisan’ny mahery vaika ny fiantraikan’izay eo amin’ny kolontsaina malagasy. Voabango ao ihany koa ny fomba amam-panao sy ny zavakanto.
Miha fohy hatrany ny fomba fanakaran-javatra na hevitra eo amin’ny zaza sy ny ankizy ary ny tanora malagasy sasany noho io zatra toloram-potsiny avy amin’ny “internet” io. Ao ihany koa ireo tsy afa-manao na inona na inona raha tsy eo ny “internet”. Tsy vitsy koa ireo mitompo teny fantatra satria izay no hita tao anaty “internet”.
Fahavoazana avokoa ane­fa ireny satria ilay saina nomen-Janahary hoenti-mandinika sy mandalina ary mamakafaka mihitsy no tsy miasa araka ny tokony ho izy. Tsy mahagaga raha tsy ma­hazaka zavatra na tranga mavesatra na olana lehibebe ny tanora sasany ka manaotao foana. Taiza tamin’ny tantaran’i Madagasikara no nahitana fiarahan’ny lahy samy lahy? Any anaty “internet” angamba no mety ahitana ny valin’io!